Naya Post Nepal | कस्तो रहला यो साता तपाईको भाग्य ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
कस्तो रहला यो साता तपाईको भाग्य ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ) यो साता अनावश्यक यात्रा एवं विविध झमेलामा झेलिनु पर्नेछ । स्वास्थ्यमा तथा सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ । मध्य सातामा एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्न सक्छ । धर्मकर्म, परोपकार, समाजसेवा जस्ता कार्यमा मन लाग्नेछ । आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउनेछ ।
वृष ( इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो ) यो साता विभिन्न कार्यक्रममा नेतृत्वदायक भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ । नयाँ ठाउँमा लगानी या रोजगारको अवसर पनि मिल्नेछ । मध्य सातामा कार्यक्षेत्रमा अरुले गरेका भनेका कुरा चित्त नबुझ्न सक्छ, संयमता अपनाउनु राम्रो हुनेछ ।
मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा ) यो सातामा मनको डरले सताए पनि व्यवहारमा फाइदा हुनेछ । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । शुभ कार्यमा सरिक भइनेछ । मध्य सातामा घरायसी कामधन्दाका लागि खट्नु पर्नेछ । पुँजी बजारको लगानीमा पनि विचार पुर्याएर निर्णय लिनु राम्रो होला ।
कर्कट ( हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो ) यो साता भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउनेछ । जीवनसाथीको सल्लाहमा गरिएको कार्यमा अधिक सफलता मिल्नेछ । नयाँ वस्त्र, अलङ्कारको प्राप्ति हुनेछ । मनोरञ्जनमा सहभागिता भइएला । आफूसँग भएको क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर जुट्ला ।
सिंह ( मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे ) यो सातामा रोकिएका अधुरा काम पुनः सुरु हुन सक्छ । पर्यटकीय स्थलको भ्रमणले मन लोभ्याउनेछ । चलाखीपूर्ण बोलीले काम बन्न सक्छ । प्रेमप्रसङ्गमा रमाइलोपन आउनेछ । सन्तानबाट सहयोग मिल्नेछ । वैदेशिक क्षेत्रको काम पनि अघि बढ्नेछ ।
कन्या ( टो, पा, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो ) यो साता भौतिक साधन जोड्ने समय छ । सामाजिक र राजनीतिक कार्यमा ख्याति कमाउने योग छ । कुनै कुराले मनखुसी र प्रसन्न पनि रहनेछ । साताको अन्त्यमा ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्नेछ । व्यवसायमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ ।
तुला ( रा, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते ) यो साता धार्मिक क्षेत्र र रमणीय यात्राको योग छ । आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुनसक्छ । आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् । साताको अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्छ । यात्रा गर्दा भने सावधानी अपनाउनु पर्नेछ ।
वृश्चिक ( तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु ) यो सातामा मन खुसी रहनेछ । आँटेको र ताकेको कार्य पुरा हुन सक्छ । रोकिएको धन हात पर्ला । सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट मानसम्मान मिल्नेछ । विद्या र बुद्धिको विकास हुनेछ । रमणीय र सुखद् व्यावसायिक यात्राको योग छ ।
धनु ( ये, यो, भा, भि, भु, धा, फा, ढा, भे ) यो साता महत्त्वपूर्ण कार्यमा व्यवधान आइपर्ला । बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ । गरेको काममा ढिलासुस्ती हुनेछ । चुनौतीको सामना गरी गलत निर्णय लिन पुगिएला सचेत रहनुहोला । साताको मध्यबाट छोटो समयमा विशेष उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ ।
मकर ( भो,जा,जि,जु,जे,जो,ख,खि,खु,खे,खो,गा,गि ) यो साता भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउनेछ । नसोचेको ठाउँबाट धनागम हुन सक्छ । प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सुदृढ बन्नेछ । वित्तिय संस्थाबाट सहयोग पनि पाइनेछ । साताको मध्यमा शेयर बजारले साथ नदेला । ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्न सक्छ ।
कुम्भ ( गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, दा ) यो हप्ता नयाँ उद्योग वा रचनात्मक काममा जुट्ने समय छ । धार्मिक तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । सोचेभन्दा आम्दानी बढ्नेछ । प्रेमीले नयाँ स्थानको भ्रमण गर्ने प्रस्ताव राख्न सक्छन् । वैदेशिक क्षेत्रको काम अघि बढ्नेछ । शेयर बजारले पनि साथ दिनेछ ।
मीन ( दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि ) यो सातामा शुभकार्यको चर्चा चल्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ । रोकिएका अधुरा पुराना कामहरू पुरा हुनसक्छ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । बन्दव्यापार र पेसाव्यवसायका क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको वातावरण बन्नेछ । मनोरञ्जनमा पनि सहभागी भइनेछ ।
२०७८ पुष १७, शनिबार प्रकाशित0Minutes 291 Views